ကလေးငယ် သွားပေါက်ရမယ့် အချိန်မှာ သွားမပေါက်လို့ စိတ်ညစ်နေလား? - For her Myanmar
ကလေးငယ် သွားပေါက်ရမယ့် အချိန်မှာ သွားမပေါက်လို့ စိတ်ညစ်နေလား?
အနာသိရင် ဆေးရှိတယ်ဆိုသလို သွားမပေါက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိမှလည်း ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ အဖြေရှာနိုင်မှာပေါ့အေ…
ကလေးအများစုက အသက် ၆ လ မှာ သွားပေါက်တတ်ကြပေမဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူတဲ့အတွက် နောက်ကျတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေး အသက်တစ်နှစ်ကျော်တဲ့အထိ မပေါက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ အရေးကြီးနေပါပြီနော်…
သွားပေါက် နောက်ကျတယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ?
ငယ်သွားစပေါက်လာပြီဆိုတာနဲ့ နောက်သွားတွေပါ ပေါက်လာတော့မှာပါ။ အများအားဖြင့် အသက် ၆ လ မှာ စပေါက်တတ်ပေမဲ့ တချို့ နောက်ကျတဲ့ ကလေးတွေက အသက်တစ်နှစ်လောက်မှ စပေါက်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ထက် နောက်ကျနေရင်တော့ သွားပေါက်နောက်ကျတယ်လို့ ခေါ်နိုင်ပါပြီ။
သွားပေါက်နောက်ကျတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ?
တချို့ ကလေးတွေက သာမန် သွားပေါက်နောက်ကျတာပါ။ ဒီလို မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ တခြားအကြောင်းရင်း တခုခု ရှိနေလို့ပါ။ ဘယ်လို အကြောင်းရင်းတွေလဲဆိုတော့…
မိသားစုထဲမှာ သွားပေါက်နောက်ကျတဲ့သူရှိရင် ယောင်းရဲ့ ဘေဘီလေး သွားပေါက်နောက်ကျတာလည်း မဆန်းပါဘူး။ ယောင်းရဲ့ မိဘနှစ်ပါး ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသားမှာ ဒီလို ရာဇဝင်ရှိနေရင် သွားပေါက်နောက်ကျတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယောင်းရဲ့ မိဘနဲ့ ယောင်းရဲ့ အမျိုးသားကို မေးကြည့်ပါ။ မိသားစုထဲမှာ တစ်ယောက်ယောက် သွားပေါက်နောက်ကျရင် ယောင်းရဲ့ ကလေးလည်း နောက်ကျနိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> ကလေးတွေ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး နာကျင်မှု သက်သာအောင် အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး လုပ်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
ယောင်းရဲ့ကလေး နို့မဝတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် နို့ဘူးတိုက်တာ မလုံလောက်တဲ့အခါ အာဟာရချို့တဲ့ပြီး သွားပေါက် နောက်ကျတတ်ပါတယ်။ မိခင်နို့မှာ ကယ်လ်ဆီယမ်ပါတဲ့အတွက် ယောင်းရဲ့ကလေးရဲ့ အရိုးနဲ့ သွားတွေ ကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကလေးနို့မှုန့်မှာလည်း ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဖော့စဖရတ်၊ ဗီတာမင် အေ၊ စီနဲ့ ဒီ ပါဝင်တဲ့အတွက် ကလေးကို ကောင်းကောင်းကြီးထွားစေပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ်က အရိုးနဲ့ သွားတွေကို ကောင်းကောင်းကြီးထွားစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောင်းယောင်းသုံးတဲ့ နို့မှုန့်မှာ ကယ်လ်ဆီယမ် မပါခဲ့ရင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောင်းရဲ့ကလေးက နို့ဝအောင် မစို့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သွားပေါက်နောက်ကျပါလိမ့်မယ်။
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းချို့တဲ့လာတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ နှလုံးခုန်နှုန်း၊ ဇီဝဖြစ်စဉ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် ထိခိုက်လာပါတယ်။ ယောင်းရဲ့ ဘေဘီလေးက သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း ချို့တဲ့လာတဲ့အခါ သွားပေါက်တာအပြင် လမ်းလျှောက်တာနဲ့ စကားပြောတာ စတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ အကုန် နောက်ကျနိုင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ ငယ်သွားပေါက်တာ နောက်ကျတဲ့အတွက် တကယ် သွားပေါက်လာတဲ့အခါ သွားမညီတာတွေ မလှတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကလေးက သွားပေါက်မှ အစာကို ကောင်းကောင်း ဝါးနိုင်မှာပါ။ ငယ်သွားပေါက်တာ နောက်ကျရင် အစာသေချာ စားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်.. ဒါများ ဆန်းလို့လားလို့ ဆိုနိုင်ပေမဲ့ သတိမထားမိနေတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်…
တစ်ခါတလေ ကြီးသွားနဲ့ ငယ်သွားပေါက်တာတွေ တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အတွက် သွားထပ်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ သွားပေါက်နောက်ကျတဲ့အတွက် သွားပိုးစားတာ ရေစီးကမ်းပြိုတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> ကလေးချက်ကြိုး ပြဿနာများအကြောင်း သိကောင်းစရာ
အရင်ဆုံး မိသားစုထဲမှာ သွားပေါက်နောက်ကျတဲ့သူ ရှိ၊ မရှိ မေးကြည့်ပါယောင်းရေ။ ဒီလိုလည်း မရှိဘူး၊ ကလေးအသက်လည်း တစ်နှစ်ကျော်နေပြီ သွားမပေါက်သေးဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်နော်။ တခြား လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တဲ့ အဝလွန်တာ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာ၊ နုံးခွေတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ တော်တော်များများ ထင်ကြတာကလေ သွားပေါက်တာ နောက်ကျရင် ဉာဏ်ရည်ချို့တဲ့တယ်ပေါ့။ တကယ်တော့ အဲ့လို မဟုတ်ပါဘူးနော်။ သွားပေါက်တာ နောက်ကျတဲ့ သူတွေမှာလည်း IQ မြင့်တဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်လို့…
ကလေးသွားပေါက်တာ နောက်ကျလို့ စိုးရိမ်နေတာလား ယောင်းရေ…တခြားပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တဲ့ အသံအက်အက်ကြီးနဲ့ငိုတာ၊ ဝမ်းချုပ်တာ၊ နှလုံးခုန်မမှန်တာတွေ ရှိ၊ မရှိ စောင့်ကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ ဒါတွေရှိနေပြီဆိုရင် အဲဒါတွေက သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းချို့တဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေမို့ ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်း တိုင်ပင်ကုသသင့်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
ဘာသာပြန်ရေးသားသူ – ဒေါက်တာ ထက်ထက်ဇော်ဝင်း (ကျန်းကျန်းမာမာ by Alinker)
Reference : Parenting
အနာသိရငျ ဆေးရှိတယျဆိုသလို သှားမပေါကျရတဲ့ အကွောငျးရငျးကို သိမှလညျး ဘယျလို လုပျရမယျဆိုတာ အဖွရှောနိုငျမှာပေါ့အေ…
ကလေးအမြားစုက အသကျ ၆ လ မှာ သှားပေါကျတတျကွပမေဲ့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မတူတဲ့အတှကျ နောကျကတြာမြိုးလညျး ရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကလေး အသကျတဈနှဈကြျောတဲ့အထိ မပေါကျသေးဘူးဆိုရငျတော့ အရေးကွီးနပေါပွီနျော…
သှားပေါကျ နောကျကတြယျဆိုတာ ဘာကိုပွောတာလဲ?
ငယျသှားစပေါကျလာပွီဆိုတာနဲ့ နောကျသှားတှပေါ ပေါကျလာတော့မှာပါ။ အမြားအားဖွငျ့ အသကျ ၆ လ မှာ စပေါကျတတျပမေဲ့ တခြို့ နောကျကတြဲ့ ကလေးတှကေ အသကျတဈနှဈလောကျမှ စပေါကျပါတယျ။ တဈနှဈထကျ နောကျကနြရေငျတော့ သှားပေါကျနောကျကတြယျလို့ ချေါနိုငျပါပွီ။
သှားပေါကျနောကျကတြဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေ ဘာတှေ ဖွဈမလဲ?
တခြို့ ကလေးတှကေ သာမနျ သှားပေါကျနောကျကတြာပါ။ ဒီလို မဟုတျဘူးဆိုရငျတော့ တခွားအကွောငျးရငျး တခုခု ရှိနလေို့ပါ။ ဘယျလို အကွောငျးရငျးတှလေဲဆိုတော့…
မိသားစုထဲမှာ သှားပေါကျနောကျကတြဲ့သူရှိရငျ ယောငျးရဲ့ ဘဘေီလေး သှားပေါကျနောကျကတြာလညျး မဆနျးပါဘူး။ ယောငျးရဲ့ မိဘနှဈပါး ဒါမှမဟုတျ အမြိုးသားမှာ ဒီလို ရာဇဝငျရှိနရေငျ သှားပေါကျနောကျကတြာမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ယောငျးရဲ့ မိဘနဲ့ ယောငျးရဲ့ အမြိုးသားကို မေးကွညျ့ပါ။ မိသားစုထဲမှာ တဈယောကျယောကျ သှားပေါကျနောကျကရြငျ ယောငျးရဲ့ ကလေးလညျး နောကျကနြိုငျပါတယျ။
Related Article >>> ကလေးတှေ ကာကှယျဆေးထိုးပွီး နာကငျြမှု သကျသာအောငျ အမွနျဆုံးနဲ့ အထိရောကျဆုံး လုပျပေးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးမြား
ယောငျးရဲ့ကလေး နို့မဝတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတျ နို့ဘူးတိုကျတာ မလုံလောကျတဲ့အခါ အာဟာရခြို့တဲ့ပွီး သှားပေါကျ နောကျကတြတျပါတယျ။ မိခငျနို့မှာ ကယျလျဆီယမျပါတဲ့အတှကျ ယောငျးရဲ့ကလေးရဲ့ အရိုးနဲ့ သှားတှေ ကွံ့ခိုငျဖို့အတှကျ အထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။ ကလေးနို့မှုနျ့မှာလညျး ကယျလျဆီယမျ၊ ဖော့စဖရတျ၊ ဗီတာမငျ အေ၊ စီနဲ့ ဒီ ပါဝငျတဲ့အတှကျ ကလေးကို ကောငျးကောငျးကွီးထှားစပေါတယျ။ ကယျလျဆီယမျက အရိုးနဲ့ သှားတှကေို ကောငျးကောငျးကွီးထှားစပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ယောငျးယောငျးသုံးတဲ့ နို့မှုနျ့မှာ ကယျလျဆီယမျ မပါခဲ့ရငျဘဲ ဖွဈဖွဈ ယောငျးရဲ့ကလေးက နို့ဝအောငျ မစို့ရငျပဲဖွဈဖွဈ သှားပေါကျနောကျကပြါလိမျ့မယျ။
သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးခြို့တဲ့လာတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျက အလုပျကောငျးကောငျး မလုပျနိုငျတော့ပါဘူး။ နှလုံးခုနျနှုနျး၊ ဇီဝဖွဈစဉျနဲ့ ခန်ဓာကိုယျအပူခြိနျ ထိခိုကျလာပါတယျ။ ယောငျးရဲ့ ဘဘေီလေးက သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျး ခြို့တဲ့လာတဲ့အခါ သှားပေါကျတာအပွငျ လမျးလြှောကျတာနဲ့ စကားပွောတာ စတဲ့ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုတှေ အကုနျ နောကျကနြိုငျပါတယျ။
အဓိကကတော့ ငယျသှားပေါကျတာ နောကျကတြဲ့အတှကျ တကယျ သှားပေါကျလာတဲ့အခါ သှားမညီတာတှေ မလှတာတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ကလေးက သှားပေါကျမှ အစာကို ကောငျးကောငျး ဝါးနိုငျမှာပါ။ ငယျသှားပေါကျတာ နောကျကရြငျ အစာသခြော စားနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူးနျော.. ဒါမြား ဆနျးလို့လားလို့ ဆိုနိုငျပမေဲ့ သတိမထားမိနတောမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျနျော…
တဈခါတလေ ကွီးသှားနဲ့ ငယျသှားပေါကျတာတှေ တိုကျဆိုငျလာတဲ့အတှကျ သှားထပျတာတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
နောကျတဈခုကတော့ သှားပေါကျနောကျကတြဲ့အတှကျ သှားပိုးစားတာ ရစေီးကမျးပွိုတာတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
Related Article >>> ကလေးခကျြကွိုး ပွဿနာမြားအကွောငျး သိကောငျးစရာ
အရငျဆုံး မိသားစုထဲမှာ သှားပေါကျနောကျကတြဲ့သူ ရှိ၊ မရှိ မေးကွညျ့ပါ။ ဒီလိုလညျး မရှိဘူး၊ ကလေးအသကျလညျး တဈနှဈကြျောနပွေီ သှားမပေါကျသေးဘူးဆိုရငျ ဆရာဝနျနဲ့ ပွကွညျ့ပါ။ တခွား လက်ခဏာတှေ ဖွဈတဲ့ အဝလှနျတာ၊ ဖှံ့ဖွိုးမှုနောကျကတြာ၊ နုံးခှတောမြိုးလညျး ရှိနိုငျပါတယျ။ တျောတျောမြားမြား ထငျကွတာကလေ သှားပေါကျတာ နောကျကရြငျ ဉာဏျရညျခြို့တဲ့တယျပေါ့။ တကယျတော့ အဲ့လို မဟုတျပါဘူးနျော။ သှားပေါကျတာ နောကျကတြဲ့ သူတှမှောလညျး IQ မွငျ့တဲ့သူတှေ ရှိပါတယျလို့…
ကလေးသှားပေါကျတာ နောကျကလြို့ စိုးရိမျနတောလား ယောငျးရေ…တခွားပုံမှနျမဟုတျတဲ့ လက်ခဏာတှေ ဖွဈတဲ့ အသံအကျအကျကွီးနဲ့ငိုတာ၊ ဝမျးခြုပျတာ၊ နှလုံးခုနျမမှနျတာတှေ ရှိ၊ မရှိ စောငျ့ကွညျ့ပါ။ တကယျလို့ ဒါတှရှေိနပွေီဆိုရငျ အဲဒါတှကေ သိုငျးရှိုကျဟျောမုနျးခြို့တဲ့တဲ့ လက်ခဏာတှမေို့ ဆရာဝနျနဲ့ ခကျြခငျြး တိုငျပငျကုသသငျ့ပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
ဘာသာပွနျရေးသားသူ – ဒေါကျတာ ထကျထကျဇျောဝငျး (ကနျြးကနျြးမာမာ by Alinker)
Tags: baby, chew, Health, teeth, Tooth, worried
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတဲ့ အဖြစ်မျိုး ကြုံလာတဲ့အခါ ဘယ်လို ဖြေသိမ့်ရမလဲ?
For Her Myanmar February 8, 2019